Czech mutauro wekutaura kit
Pakupera kwechidzidzo ichi, unenge wave kukwanisa:
kuchengetedza imba yehotera,
tenga matikiti ekufambisa ufambe,
isa order parestaurant,
kutenga zvipo nezvokudya.
Muchidimbu, iwe unofanirwa kunge wakagadzirira kurega kuva vatorwa muCzech Republic uye kuita shamwari ikoko. Isu tichafara kana zvese izvi zvikakupa iwe chishuwo chekudzamisa ruzivo rwako rweCzech.
Uri mushanyi anoda kuziva here? Anofarira mutauro? Nyanzvi inogadzirira kugara muCzech Republic? Iyi MOOC inokupa iwe kuti uwane izvo zvekutanga zvemutauro wenyika ino padyo nesu, nharaunda uye nhoroondo.
Nhaurirano pfupi kwazvo dzinoshanda dzinokutendera iwe kuti utore mazwi uye otomatiki anodiwa pakuchinjana kwako kwemazuva ese. Nhaurirano dzacho dzichaperekedzwa nemapoinzi egirama uye mashoko ari nyore. Zviitiko zvevhidhiyo uye maekisesaizi akanyorwa zvinokutendera kuti utarise ruzivo rwako uye kufambira mberi. Pakupedzisira, isu tichakuudza nezve hupenyu hwezuva nezuva muCzech Republic.
Czech mutauro wekutaura kit January 17th, 2022Tranquillus
VERENGA 2021 bhizinesi rekudzidzira
pashuresauvTage: kudzidza kuchengetedza hupenyu pamazera ese
zvinoteveraDunhu cyber chiitiko mhinduro nzvimbo: kusikwa kwezvimiro mu7 matunhu
Taura nezvekuravira uye zvekunakidzwa semunhu wekuzvarwa!
Dhinda Pane Kudiwa: gumi mibvunzo yekuzvibvunza iwe kutanga!
Kushaikwa kweBDES: chikonzero chekudzingwa?
Kudyidzana uye kubatana: cybersecurity iri kuvakwa paEuropean Union level